Gwa ndị Ngalaba IT gị ka ha bụrụ Firefox | Martech Zone
Echere m na m na-mara mma emebi n'oge gara aga mgbe ọ na-abịa IT ngalaba. M gbara ọsọ a na netwọk na mbụ m ọrụ na bụ Ihọd na niile ụmụaka na ngalaba (wezụga m Director n'oge ahụ, M mgbe niile zụtara otu maka ya mbụ).
Moga n’etiti ọrụ dị iche iche n’ahịa ahịa na teknụzụ etinyela m n’akụkụ abụọ nke ọnụ ụzọ IT ka m wee mara otu esi na-akụda ya abụghị ịnweta ngwaọrụ ịchọrọ. Ọ bụ ezie na ọ na-esiri m ike ịkwado, ekwenyesiri m ike na nkà na ụzụ ga-eweta ọganihu na arụmọrụ. Ọ gaghị enwe ike ịme ya ma ọ bụrụ na ị kpọchiri. Ezigbo enyi m Adam Small, na-agba ọsọ a Mobile Marketing company ebe a na Indianapolis, na-etinye ya zuru oke… bụ ngalaba IT gị na-enyere gị aka gị ma ọ bụ nkwarụ ị?
Anọla m n'akụkụ ahịa nke ọnụ ụzọ na ọrụ m ugbu a ma na-anwa igwu egwu site na iwu - mana ọ dịghị mfe. Amaara m na sọftụwia zuru oke dị ebe ahụ na - eme ka ụbọchị m dị elu - enweghị m ike iji ya ọ bụla. Anọ m na PC ugbu a karịa Mac m kwesịrị ntụkwasị obi. Ọ bụ ihe mgbaka.
Enwere m maka nsogbu ahụ, ọ bụ ezie! Kama ịtamu ntamu (n'èzí blọọgụ m), ana m eji iwu kachasị ike igwu egwu ma gbalịa chọpụta ihe dị ebe ahụ iji nyere aka. Otu n'ime ndị nzọpụta kachasị m na-agba ọsọ na Firefox. Ọbụghị naanị na ọ bụ ihe nchọgharị dị egwu, mana tinye-ons dị ezigbo ịtụnanya:
FireFTP - bụ ezigbo FTP ngwa m nwere ike ịgba ọsọ ozugbo na Firefox. Ọ bụ n'efu (mana biko nye onyinye - ọkara nke onyinye niile na-aga ọrụ ebere). O nwere ihe niile ịchọrọ maka onye ahịa FTP siri ike!
@IGIHE - bụ onye ahịa Twitter na-agba ọsọ na ogwe aka Firefox. Ọ naghị adị larịị dịka ịgba ndị ahịa gị ume, Nke iri abụọ na atọ, ma ọ na-aghọ aghụghọ. Ọ dị m ka ya bụrụ na ha ga-etinye ụfọdụ taabụ na ya iji mee ka ọ dịkwuo mfe ịga site na azịza nye ozi ziri ezi, wdg.
AgbaZilla - Ọ dị mgbe ị kwesịrị ị nweta agba agba nke ibe weebụ? Nnukwu ngwa ọrụ iji mee ya!
Greasemonkey - ihe ntinye di itunanya nke n’enye gi ohere ide ma tinye edemede nke gi n’ime ibe. E nwere ọtụtụ nde ederede GreaseMonkey na-adọrọ mmasị n'ebe ahụ nke nwere ike inyere gị aka na gmail na ọtụtụ ngwa ndị ọzọ. Lelee Greaspot nke kacha ọhụrụ!
Mmelite: Jiri Nkpachara anya na Greasemonkey, enwere ederede n'ebe ahụ ga-anwa ijide ozi nbanye maka weebụsaịtị ego.
CoolIris - ihe ịtụnanya fun add-na na-eme gị PC ma ọ bụ Mac n'ime Media nchọgharị ogologo anụ!
Foxclocks - eme oge na-emegharị gị? Nke a bụ obere mgbakwunye nwere ike inye gị oge ugbu a gburugburu ụwa.
ScribeFire - enwere ọbụna nchịkọta akụkọ nchịkọta akụkọ nke ị nwere ike itinye ozugbo na Firefox nke na-eji XML-RPC, ọkọlọtọ n'ọtụtụ ebe ntanetị maka ịdebanye ọdịnaya. Anaghị m eji nke a, M na-arapara n'ahụ ol 'nchịkọta akụkọ na WordPress, mana ọ ka dị mma!
Ikekwe akụkụ kachasị mma nke a bụ na ị chọghị ikike nchịkwa iji wụnye mgbakwunye ndị a na mpaghara gị, yabụ ị nwere ike itinye ọtụtụ ngwaọrụ pụtara ìhè na-enweghị nsogbu gị. Mee ka ụmụ IT gị tinye Firefox taa! N'ezie, ọ bụrụ na Firefox amalite ịdakwasị gị… akpọla desktọpụ enyemaka IT gị… bido iwepụ ụfọdụ ndị tinye-ons ahụ!
Tags: tinye-onsadobefirefoxFirefox tinye-onstinye-onsakuko
Dec 4, 2008 na 9:26 PM
A mebere cornucopia nke arụpụtaghị ngwaọrụ.
Dec 4, 2008 na 9:50 PM
OK… Aga m anwale nke a ọzọ…. noscript na-ekpuchi saịtị gị btw. M kwere marketingtechblog.com, ma o doro anya na nke ahụ ezughị. Ahụghị m nke nke ọzọ 16 na-ekwe ka….
Mana rue mgbe ihe nchọgharị ndị ọzọ na-akwado ActiveX, IE ga-enwe njide ụkwụ na Ngalaba IT.
Dec 4, 2008 na 9:58 PM
ActiveX ga-anwụ n'ime afọ ole na ole, ck, ma ọ bụ opekata mpe ahapụghị agbanwe… akara okwu m. Enweghị ngwa weebụ ọ bụla kwesịrị ịchọ nrụnye na ọkwọ ụgbọala awụnyere n'ime sistemụ arụmọrụ. Ọ dịghị mkpa.
Microsoft na-arusi oru ike ịgbasa iru Silverlight. Dịka Flex / AIR, Silverlight ga-abụ isi ihe eji ewu maka iwulite web na ngwa desktọọpụ site na teknụzụ Microsoft. Office ga-abụ ụlọ ọrụ mbụ kachasị ga-ebute ụzọ a.
Enwetụbeghị m saịtị m na noscript! Ekwenyesiri m ike na ahụmịhe nke ndị ahịa na-eweta na saịtị nwere ike iweta na saịtị. C'mon ck… ka anyị mee ka ị banye na 2008. 😉
Dee 5, 2008 na 9: 58 AM
N'oge a, Active-X na-eme ihe ọ bụla na teknụzụ na-abịanụ enweghị ike ịme.
Ahapụ ka m chọọ ka ị banye na saịtị echedoro m site na onye na-agụ mkpịsị aka. Olee otú nke ahụ si eme? Njikwa-X njikwa.
Ya mere, ruo mgbe ha ma na-eme ka ihe nchọgharị na-enweghị ike ịnwere ike ịnweta usoro ndekọ aha ndị mmadụ, ma ọ bụ na ha abịa n'elu ikpo okwu na-anọchi nke Active-X… ọ ga-anọ gburugburu.
Dec 4, 2008 na 10:10 PM
N'ime ụlọ ọrụ m nwere obi ụtọ na-eduga ops na IT, anyị mere Firefox ihe nchọgharị ndabere (IE nọkwa ebe ahụ). The caviat bụ na ndị ọrụ anyị bụ ndị ọtụtụ tech savvy. Ọ gwụla ma ị nọ n'ime ụlọ ọrụ na-achịkwa nke ọma, oke oke nke usoro mkpọchi abaghị uru. Ọ ga-akara m mma ka ndị ọrụ teknụzụ m na -achọ azịza maka otu esi eme ka ndị m dị irè karịa ịnwa idebe onye ọ bụla.
Mkpọchi-ala bụ ụlọ akwụkwọ ochie. Ọzụzụ na agụmakwụkwọ kwesịrị ekwesị bụ ihe na-eme ka ụlọ ọrụ na-aga n'ihu nwee ọfụma.
Dee 5, 2008 na 11: 47 AM
Ihe agaghị adị mfe ma ọ bụrụ na ị kpọọ iwu. Mana, ọ bụ nhọrọ kachasị mma ịhọrọ ogologo oge.
Nice nke firefox addons. Enweghị m nke ọ bụla n’ime ihe ndị ahụ edepụtara na Firefox m. Kwenye gị na GreaseMonkey. Enweela m nsogbu ụfọdụ na mbụ ma ihe dị mma na enweghị ya.
Dec 5, 2008 na 5:50 PM
Anọwo m na-eji Firefox ogologo oge ugbu a, oge ụfọdụ ana m echefu imirikiti ndị mmadụ ka na-eji Ntụgharị eme ihe.
Nnukwu ndepụta tinye-ons. Aghaghị m ịpụ na mgbakwunye m n'ihi na m dị ka nwatakịrị nọ n'ụlọ ahịa swiiti na ha oge. Enwere m taabụ taabụ, nyocha ihu igwe, ebe a na-ebudata ihe, yaadị itoolu niile!
Ọ na-atọ ọchị mgbe ị na-ele ụfọdụ nchọgharị Firefox. Ọkara nke ihuenyo ha ka ewere site na toolbars tinye!
Dec 7, 2008 na 9:59 PM
Ahụmahụ m na ọrụ m (ọ bụghị nke ọhụụ) bụ na m ga-egosi na m tozuru Firefox iji nweta ya. Onye ọ bụla bụ ọkọlọtọ na ntụgharị, mana mgbe m gosipụtara obere teknụzụ maka mmadụ "ọrịre", ha gosiri m folda nzuzo ahụ iji banye Firefox. Amaghị m ihe kpatara na onye ọ bụla enweghị nke a, echere m na ha achọghị ịme "ọzụzụ". N’abia n’ulo oru m si n’èzí n’agbanyeghi, amataworị m otu esi eji FF mee ka ihe m na arụpụta.
Jun 22, 2012 na 10:52 AM
Iji mee ka ngalaba IT gị kwenye na Firefox dị egwu karịa, ikekwe ị kwesịrị igosi ha etu ndị raara onwe ha nye si eme nchọgharị. Ihe akaebe gị nwere ike ịbụ nke a Firefox akuku gburugburu. Anaghị m ahụ ihe ubi akuku ewepụtara maka ihe nchọgharị ndị ọzọ!